Ohatrinona ny haben'ny taratasim-barotra? | Famoronana an-tserasera
Lola curiel | | Graphic Design, dia midika hoe
Na dia ankehitriny aza dia ny nomerika ihany no zava-dehibe, Ny karatra fandraharahana dia mitohy manampy be dia be hampahafantatra anao amin'ireo mpanjifa sy mpiara-miombon'antoka vaovao. Ankoatr'izay dia manampy amin'ny fampitana ny sary sy ny hafatry ny orinasa izy ireo. NAn famolavolana tsara, dia afaka mahaliana ny olona omenao azy amin'izay atolotrao tsotra satria mampita sary matihanina sy tsy miovaova amin'ny zavatra torinao amin'ny maha orinasa anao.Noho izany dia tena ilaina ny mitandrina ny antsipiriany rehetra amin'ny milimetatra: ny loko, ny typeface, ny style ary, mazava ho azy, ny habeny. Amin'ity lahatsoratra ity dia manome anao hevitra vitsivitsy izahay momba ny habe atoro ho an'ny karatra fandraharahana hahafahanao misafidy ny endrika tonga lafatra ho anao.
1 Torolàlana momba ny haben'ny karatra orinasa
1.1 Haben'ny mahazatra
1.2 Fanapahan-kevitra, fomba maody ary habe amin'ny pixel
2 Habe sy endrika hafa
2.1 Karatra ara-barotra mitsangana
2.2 Karatra ara-barotra toradroa
2.3 Karatra Mini
2.4 Karatra mivalona
2.5 Karatra fandraharahana misy sisin'ny boribory
3 Amin'ny endrika ahoana no tokony hitehirizako ny karatry ny orinasa?
Torolàlana momba ny haben'ny karatra orinasa
Misy habe mahazatra ho an'ny karatra fandraharahana? Any Espana dia heverinay izany ny haben'ny karatra fandraharahana dia 85 x 55 mm, satria io no ampiasaina matetika indrindra any Angletera sy Eropa Andrefana.
Na izany aza, ary na dia toa adala aza izy io, io fandrefesana io dia mety miova arakaraka ny firenena. Ohatra, any Etazonia sy Kanada dia mahazatra azy ireo ny manana habe 88,9 x 50,8 mm. Any Russia sy any amin'ny ankamaroan'ny firenena any Amerika Latina dia 90 x 50 mm matetika izy ireo. Any Japon, ny mahazatra indrindra dia ny refy misy azy ireo 91 x 55 mm.
Fanapahan-kevitra, fomba maody ary habe amin'ny pixel
Raha miara-miasa amin'ny programa famolavolana ianao dia mety mila fantatrao izay ny haben'ny karatra amin'ny pixel, inona ny vahaolana mety ary amin'ny maody loko inona no tokony hiasanao.
Ny haben'ny pixel dia mazava ho azy fa miankina amin'ny haben'ny karatraAto amin'ny sary etsy ambony dia avelako anao ny famintinana izay ny fitoviana amin'ny endrika samihafa. Ny refin'ny karatra US sy Kanadiana (88.9 x 50.8 mm) dia 1050 px x 600 px. Eoropeana sy UK fenitra mazàna dia haben'ny 1038 x 696 pika.
Amin'ny maha karatra fandraharahana natao ho an'ny fanontana dia zava-dehibe ny ahatsiarovanao ny fiaraha-miasa syl maody miloko CMYK, ary tsy miaraka amin'ny RGB, izay matetika no ampiasaintsika rehefa mamolavola tranonkala. Ary farany, atoro anao ny fanamboarana vahaolana amin'ny 300 dpi ho an'ny vokatra tsara indrindra.
Habe sy endrika hafa
Na dia hitanao aza, misy fepetra mahazatra sasany, tsy ny karatra mahitsizoro mahazatra ihany no misy eny an-tsena ary misy ireo izay misafidy endrika mahasahy sy mamorona bebe kokoa.
Karatra ara-barotra mitsangana
Matetika ny karatra fandraharahana dia manaraka lamina marindrano. Na izany aza, tsy voatery izany. Ny fisafidianana karatra fandraharahana mitsangana dia mety hampiavaka anao amin'ny ambiny. Ho fanampin'izany, manintona tena manintona izy ireo.
Karatra ara-barotra toradroa
Iza no milaza fa tokony ho mahitsizoro ny kara-pandraharahana? Ny lamaody amin'ny kianja dia tena lamaodyIzy ireo dia kanto ary manome ny maoderina mikasika zavatra mahazatra toy ny karatra. Inona koa, Raha te-hanavaka ny tenanao amin'ny ambiny ianao, amin'ity fomba ity dia ho mora kokoa noho ny amin'ny endrika mitsangana, satria samy hafa tanteraka ny endrika. Ohatra, alaivo sary an-tsaina hoe ao amin'ny kaongresy na amin'ny foara ianao, amin'ireo tranga ireo dia mahazatra ny mifanakalo karatra, raha misy olona manana karatra 20 ao am-paosiny ary ireo karatra ireo dia ny anao fotsiny dia toradroa tsy azo atao ny mivoaka tsy voamariky eo amin'ireo mahitsizoro.
Mitady zavatra kely kokoa noho ny karatra mahazatra? Ity safidy ity dia mety hahaliana anao, ireo karatra bitika atolotra eny an-tsena, matetika dia manana tery sy lava, mahitsizoro ary Eo anelanelan'ny 70 x 28 mm sy 85 x 25 mm no refesiny.
Lavorary io famolavolana io raha mila izany ianao toerana fanampiny hanampiana fampahalalana amin'ny antsipiriany. Na dia karatra somary lehibe kokoa aza izy io dia mifanaraka tanteraka amin'ny haben'ny poketra na paosy satria aforitra roa.
Karatra fandraharahana misy sisin'ny boribory
Ireo karatra ireo dia manana tombony lehibe ary izany dia ny fananana sisiny boribory, tsy miondrika ny zorony ary mora kokoa ny mitondra azy ireo miaraka aminao nefa tsy manimba azy ireo. Azonao ampiharina amin'ny endrika endrika sy habe izay efa noresahintsika teo aloha ity fomba ity.
Amin'ny endrika ahoana no tokony hitehirizako ny karatry ny orinasa?
Miankina amin'ny toerana anaovanao pirinty azy ireo izany. Tsy ny mpanonta rehetra no manaiky endrika mitovy. Manoro hevitra anao aho rehefa manonta ianao dia ento ny rakitra ao amin'ny .pdf, fa inona aza manary ny rakitra azo ovaina original (.ai, .psd, .idd), raha sanatria ka mila manova ianao na raha angatahina aminao ny hanondrana azy amin'ny endrika hafa.
Aorian'ireny fanazavana ireny dia vonona ianao hahita ny endriny tonga lafatra, fa havelako eto ianao toro-hevitra mahasoa sy azo ampiharina mba hahafahanao manao ny tenanao mamorona karatra fandraharahana tonga lafatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Ohatrinona ny haben'ny taratasim-barotra?
Alao ny fotoana tsara indrindra ary alao amin'ny sary pirintinao